ခဏလေးပါပဲ….. | PoemsCorner
ငါ နင့်ကိုစွန့်လွတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလေ ခဏလေးနင့်နဲ့ ခွဲနေတာပါ
နင့်ကို မချစ်ဘူးလို့ မပြောခဲ့ပါဘူး ငါတို့မှာအချိန်တွေရှိပါသေးတယ်လို့ပြောခဲ့တာလေ
နင့်ကို မုန်းတယ်လို့လဲ ငါမပြောခဲ့ပါဘူး နင့်ကိုမတွေ့ချင်ဘူးပဲပြောခဲ့တာပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နင့်ကိုတွေ့ရင် ပိုပိုချစ်လာလို့လေ နင့်ကိုရက်ရက်စက်စက် မထားခဲ့ပါဘူး ငါ ခဏလောက်နင့်အနားက သွားပါရစေလို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ …
နင့်ကို ဘယ်တော့မှမချစ်ဘူးလို့မပြောရက်ခဲ့ပါဘူး နင့်ဘေးမှာထာဝရရှိနေပါ့မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ
နင့်ကို နာကျင်အောင်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး ငါကိုယ်တိုင်ပဲနာကျင်ခြင်းကိုခံယူတာပါ
နင့်ကို ပြောင်းလဲအောင် ငါမလုပ်ခဲ့ပါဘူး နင်သာငါ့ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တာပါ
ငါ နင့်ကို ခဏလေးခွဲထားမိတယ်
အဲဒီ ခဏလေးတွေအတွက် အခုတော့ ငါ့နှလုံးသားနဲ့ရင်းပြီး တဘ၀လုံးပေးဆပ်ရတော့မယ်…..
နင့်ကောင်မလေး ၁ယောက်ကို ခဏလေးတွဲခဲ့တယ်
အဲဒီခဏလေးရောက်လာတဲ့ ကောင်မလေးကို နင့်က တဘ၀လုံးပေးဆပ်ရတော့မယ်..
နင်ချစ်ခဲ့တာ ငါ…တဲ့ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုတော့ ယူရလိမ့်မယ်တဲ့
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ငါ့ နင့်ကိုထားခဲ့တဲ့ ခဏလေးအတွက်လျော်ကြေးတဲ့…..
အဲဒီကောင်မလေးအတွက်ကတော့ ခဏတာ နင့်အနားမှာရှိပေးတဲ့အတွက် ဆုလဘ်တဲ့….
ငါ နင့်ကိုလျော်ကြေးပေးခဲ့ရတယ်…ငါ့ နှလုံးသား ငါ့ အချစ် ငါ့ဘ၀…..
ငါ နင့်ကို ခဏလေးပဲ ခွဲနေမိတာပါ…..
In: ဝတ္ထု Posted By: thaeswezin Date: Jun 17, 2010
လမင်း တစ်စင်း နင်….
Leave comment6Comments & 831 views
ကောင်းပါတယ်……ဘ၀တူတွေ့ ပါ……..ထားခဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး………..သူထွက်သွားတာပါ……..လုံး၂မချစ်သေးတာထက်……ချစ်ပြီဆုံးရူးရတာ……ကောင်းပါတယ်…….ပြန်တွေ့ နိင်ပါစေဗျာ။
By: khampay at Jun 17, 2010
သုခချိုရ စာလေးကို အရမ်းကြိုက်ပြီး ခံစားချက်နဲ့တူလို့ ကူးယူခွင့်ပြုပါနော် ……….
By: su pyae at Jun 23, 2010
ခံစားချက်ချင်းတူတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခံစားချက်ချင်းတူမှလဲ ခံစားနိုင်မှာလေ
By: thukhacho at Jun 23, 2010
ဟုတ်တယ်…. ခဏလေးခွဲခွာနေရတာကို အပြစ်လို့ထင်နေတယ်… အနေဝေးတော့လည်း သွေးအေးသွားကြတာပါပဲ… နောက်ဆုံးတော့ လမ်းခွဲမယ်လို့ ပြောတဲ့အထိပဲ… သူ့သဘောအတိုင်း ကိုယ်က လမ်းခွဲပေးတော့လည်း ရက်စက်တယ်တဲ့လေ… လမ်းခွဲခံရတဲ့သူကိုမှ ရက်စက်တဲ့စကားတွေ သုံးပြီး ပြောရက်တယ်…..
မင်းအလိုကျ ငါက မင်းကိုထားရစ်ခဲ့တော့..
မင်းပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်း ….. နင်အရမ်းရက်စက်တယ်တဲ့….. အရမ်းအခံရခက်တာပဲ…
By: Moon at Jul 30, 2010
By: ကေသရီ at Sep 26, 2011
By: PC at Sep 26, 2011